Rosiana Bilaogera: Voasazy Hifonja Dimy Taona Noho Ny “Kabary Fankahalàna” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 30 Desambra 2015 12:13 GMT
Vadim Tyumentsev teo ampihainoana ny didim-pitsaràna nanameloka azy tao amin'ny fitsaràna. Pikantsary avy aminà lahatsary Youtube, natolotry ny Radio Liberty.
Rosiana iray bilaogera avy ao an-tanànan'i Tomsk no voaheloka noho ny kabary fankahalàna sy antso ho amin'ny fanaovana an-tendrony tety anaty serasera, ary nomena sazy hifonja dimy taona an-tranomaizina, taorian'ny nanmpakarany lahatsary maro tao amin'ny YouTube sy VKontakte.
Hitan'ny fitsaràna iray ap amin'ny distrikan'i Tomsk ho meloka i Vadim Tyumentsev araka ireo andinin-dalàna roa ao amin'ny fehezan-dalàna Rosiana momba ny heloka bevava—Andininy faha 282 (“hetsika ikendrena ny hanentanana fankahalàna sy fifanoherana”) ary ny faha 280 (“antso atao amin'ny daholobe hanao hetsika fanaovana an-tendrony”)— ary dia nanameloka azy hanefa sazy dimy taona an-tranomaizina any am-ponja. Noraran'ilay fitsaràna ihany koa ilay bilaogera tsy hamoaka votoaty na inona na inona ety anaty aterineto mandritry ny telo taona aorian'ny fahavitan'ny saziny.
Araka ny tatitry ny Radio Liberty, ny Febroary 2015 no nanomboka ny raharaha heloka bevava anenjehana an'i Tyumentsev, rehefa nahitàn'ny fampanoavana hadisoana tao anaty lahatsary roa nalefan'ilay bilaogera tao amin'ny YouTube sy ny momba azy tao amin'ilay tambajotra Rosiana VKontakte. Tany ampiandohana, nitaky sazy efatra taona ny fampanoavana.
Nampangain'ireo mpanadihady i Tyumentsev ho “nampiseho habibiana tamin'ireo olom-pirenena monina ao amin'ny faritr'i Luhansk sy Donetsk any Okraina” sy “nanentana fankahalàna an'ireo olona manana sata mpifindra monina ao Rosia.” Nolazain'ny fampanoavana ihany koa fa nitety ny aterineto ilay bilaogera mba hiantso ny fandraisana anjara aminà famoriambahoaka am-pilaminana iray tsy nahazoana alàlana sy nampiasa ny aterineto mba hitsikeràna ny manampahefana ao an-toerana. Nomarihan'ireo mpisolovava an'i Tyumentsev fa “tsy azo lazaina ho antso ho amin'ny fanaovana an-tendrony” ireo antso ho fandraisana anjara amin'ilay famoriambahoaka ary hoe ireo olona malaza fanta-bahoaka ireo manampahefana ireo ka noho izany dia tsy maintsy mizaka ny tsikera avy amin'ny vahoaka , mifanaraka amin'ny lalàna Rosiana.
Tany am-boalohany ilay bilaogera avy ao Tomsk dia fantatra tamin'ny hetsika nataony tety anaty tambajotra sôsialy sy ivelan'ny aterineto: ny Aogositra 2014, nandray anjara tamin'ilay “Diabe ho fanaovana an'i Siberia ho Federasiôna” izy.
Nolavin'i Tyumentsev izy tenany ny hiaiky ho meloka teo anatrehan'ny fitsaràna ary nolazainy fa tany am-piandohana izy dia nanao sonia fiaikena heloka noho ny famoretana nataon'ny FSB Rosiana (sampandraharaha mpitandro filaminana federaly). Nitaky famerenana mandinika ny teny ilay bilaogera momba ireo votoaty nalefany tety anaty aterineto ary nilaza fa “fandikàna vilana” ny teny nolazainy ary nampiasaina handetehana azy ny fandalinana natao. Nolavin'ny fitsaràna ny fangatahan'i Tyumentsev. Efa nametraka antontan-taratasy ho fampàkarana ny didim-pitsaràna sahady ny mpisolovavan'ilay bilaogera.